Moments leh saaxiibo 57
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagu xiro xaaladaha wacyiga iyo riyoodka si aan u jirin isbeddel xilliga uu qofka hurdiga ahi miyir qabo?
Mawduuca baaritaanku waa mid aan badanaa la tixgelinaynin. Kuwa tixgeliyey waxay guud ahaan u maleeyeen inaysan u qalmin intii. Laakiin maaddada ayaa muhiim ah. In kasta oo u dhexeeya miyirka miyir-qabka ee soo jeedidda iyo riyooyinka lama baabiin karo illaa iyo inta ninku aanu wax ka bini aadam ahayn, si weyn ayaa loo gaabin karaa. Marxaladda dambe ee ninku wuu ogyahay waxa isaga ku saabsan, oo si gaar ah ayuu uga war qabaa naftiisa. Wadanka riyada ku jira wuxuu ku baraarugay qaab ka duwan.
Ninka dhabta ahi waa mabda 'miyir leh, iftiinka miyirka ee jidhka ku jira. Isaga, sida mabda'aasi miyir qabo, wuxuu la xiriiraa gobolka soo kacaya ee jirka, oo ah qanjidhada ku dhex yaal qalfoofka. Dabeecada jirka dabiiciga ah waxay u gudbisaa isaga macluumaad ku saabsan howlaha qasabka ah ee jirka lagu sameeyo, sida neefsashada, dheefshiidka, qarsashada, iyo natiijooyinka howlgaladaas inay yihiin kuwa lagu farxo ama xanuun dareemayaasha. Dareenka, iyada oo loo marayo dareemayaasha, ayaa ka dhiga mabda'a miyir-qabka ah inay ka warqabaan waxa adduunka ku jira. Ficillada dabeecadda ee mabda'a miyirka leh gudaha iyo dibaddaba. Inta lagu jiro xaaladda soo jeedinta, gudaha ilaa xaaladda jirka ninka; laga bilaabo iyada oo aan loo eegin waxyaalaha dareenka adduunka ka jira. Dabeecaddu waxay ku kacdaa isaga iyada oo loo marayo habka dareemayaasha naxariista, rugta duubista, taas oo, maskaxda ku jirta, ayaa ah jirka maskaxda. Bini’aadamka wuxuu gacanta ku hayaa jirkiisa iyada oo loo marayo nidaamka dhexe ee neerfaha, xarunta xukunka oo sidoo kale ah jirka loo yaqaan 'pituitary'. Marka mabda'a miyirku wuxuu la xiriiraa dabeecadda jirka jirka, oo wuxuu ka fal-celiyaa dabeecadda oo wuxuu ku hayaa jirka jirka isla jirka.
Jirka 'pituitary' waa fadhiga iyo xarunta taas oo mabda'a miyirku ka helo aragti ka timaada dabeecadda taas oo mabaadii'da miyirku ay ku maamusho, wax ka qabato ama ficil ka soo horjeedo dabeecadda iyada oo loo maro nidaamka dhexe ee neerfaha. Iftiiminnada xiriirada ee gobolka ka soo kacaya ee ku saabsan jirdhiska jirka ayaa faragelinaya oo joojinaya waajibaadka iyo waajibaadka dabiiciga ah ee jirka. Iftiinka iftiimaya ee ku dhaca jidhka ayaa wuxuu culeys saaraa howlaha dabiiciga ah ee jirka, wuxuuna ka hor istaagaa awoodaha nolosha inay hagaajiyaan unugyada iyo xubnaha iyo mashiinnada jirka, sidaas darteedna ku sii hayaan xoog. Nalalka iftiinka wuxuu jirka oo dhan xasilloonidarro ku hayaan, oo haddii xiisadda ay sii waddo muddo dheer oo ku filan dhimashadu waa ay raaci doontaa, maaddaama xoogagga nolosha aysan geli karin inta jirku uu ku jiro xiisad salka ku haysa nalalkaas. Si jirka loo sii wado waa lagama maarmaan markaa waa in jirku leeyahay waqtiyo aan la faragalin, iyo goorta uu nasan karo oo uu soo kabsan karo. Sababtaas awgeed ayaa waxa muddada loogu yeedho hurdo la siiyaa jidhka. Hurdadu waxay jidhka siisaa xaalad ay ciidamada nafigu geli karaan, ku hagaajin karaan, kuna quudiyaan. Hurdadu waxay suurogal tahay markii iftiinka miyirka miyirku joogsado inuu ku shidmo jirka ba'an.
Mabda 'miyirku waa qayb maskaxda ka mid ah; waa qaybta maskaxda ku xirisa jirka. Xiriirka waxaa lagu sameeyaa nidaamka dhexe ee neerfaha waxaana lagu xukumaa jirka qalliinka. Qulqulka waa gobolka ka dhashay xiriirka ka dhexeeya nidaamka neerfaha dhexe iyo nidaamka dareemayaasha naxariista leh ee loo maro xarunta guud, jirka qalcadda. Ilaa iyo inta mabda 'miyirku uu iftiiminayo iftiinkiisa jirkiisa ayuu baraarugaa - taasi waa, ka warqabida adduunka. Ilaa inta aragtiyo la siinayo mabda'a miyir-qabka iyada oo loo marayo nidaamka neerfaha ee dareenka leh, mabda'a miyirku wuxuu ilaalinayaa iftiinkiisa ku aaddan jidhka qulqulaya sidaas darteedna wuxuu qabanayaa jirka jirka oo dhan. Marka jirku aad uga daalo daalka oo uu ka dhammaado xooggeeda muhiimka ah ma heli karo wax aragti ah oo dabiiciga ah sidaas darteed looma gudbin karo jidhka qalbi furan, in kasta oo maskaxdu halkaas ku heli lahayd. Taasi waa kiiska jirku daalan yahay laakiin maskaxdu rabto inay soo jeeddo. Marxalad kale ayaa ah in halka maanku laftiisu uusan dan ka lahayn dareenka waxa laga yaabaa inuu ka helo dabiiciga isla markaana uu diyaar u yahay inuu ka baxo. Labada xaaladoodba hurdo ayaa ka dhalan doonta.
Hurdadu waxay bilaabmaysaa marka wareegga isku xiraya labada qaybood ee dareemayaasha jirka ay qalloocan yihiin si xiriirku u jabo.
Ka dib xiriirku wuu jaban yahay mabda'a miyirku wuxuu ku jiraa xaalad riyooyinka, ama xaalad ku saabsan wax aan xusuusin lagu hayn. Riyooyinku waxay dhacaan marka mabda'a miyirku uu iftiimmo, sida had iyo jeer dhacda, markay ku dhacdo dareemayaasha dareenka, kuwaas oo ku xidhan maskaxda. Haddii mabda'a miyirku uusan ku iftiimin dareemahan ma jiraan riyooyin.
Inta lagu jiro saacadaha soo kacaya mabda'a miyirku wuxuu u dhexeeyaa si toos ah, taabasho toos ah sida jirka oo kale. Xiriirka noocan oo kale ah waa waxa qofku ugu yeero miyir, laakiin xaqiiqdii taasi miyir beel ma aha. Si kastaba ha noqotee, illaa iyo hadda, iyo iyada oo ay tahay wax uun in ninku ku sugan yahay xaaladdiisa uu ogaan karo naftiisa, ha u oggolaado, daalnimadda darteed, in loogu yeedho miyir-qab. Taasi waa aasaaska uu ku taagan yahay xaaladdiisa soo toosi. Way ku adkaan doontaa inuu ka warhayo ama uu ka warqabo wax kastoo dunidan ka baxsan aysan isaga ku dhaqmin oo kicin. In kasta oo uu dabeecadda ku kicinayo haddana siyaabo kala duwan ayuu u miyir qabaa, oo wadarta guud ee dareenka farxadda leh ama murugada leh ayaa isagu iska leh. Kaydka guud ee muuqaallada muujinta dabiiciga ayuu isagu isu aqoonsadaa. Laakiin taasi laftiisa maahan. Isugeynta guud ee sawirada waxay ka hortagtaa inuu ogaado qofka uu yahay ama qofka uu yahay. Maaddaama uusan garaneyn cidda uu yahay, bayaankan keliya ma siin doono macluumaad badan qofka celceliska ah, weli waxay noqon doontaa mid qiimo leh haddii macnaheeda la xaqiijiyo.
Waxaa jira, sida nin seexdo, wakhti madoow oo udhaxeeya inuu miyir qabo gobolka soo jeedo iyo inuu ku baraarugo gobolka riyada. Xilligan mugdiga ah, inta lagu jiro ninku miyir la'aantu, waxaa sababa burburka xirirka marka daminta la demiyo iyo nalka mabaadiida miyirku mar dambe kuma shidmayo jirka qulqulaya.
Nin aan ka warqabin wax aan ahayn dareenka laga helay dareenka gobolka soo kacaya ama xaaladda riyada, dabcan, kama warqabo naftiisa, sida la yiraahdo, goorta aan wax dareen ah laga helin, midna markuu soo jeedo. ama riyo. Iftiinka miyirku waa inuu ogaadaa naftiisa marka laga reebo dareenka toositaanka ama riyada, si ninku miyir qabo. Haddii iftiinka uusan ka warqabin naftiisa iyo dowlad gebi ahaanba ka duwan waxa loo yaqaan gobollada soo kicinta iyo riyada, markaa ma yeelan karto muddo xaddidan oo miyir-qabasho ah oo ka dhexeysa labada dawladood. In kasta oo uusan qofku si isdaba joog ah u miyir yeelan karin, wuxuu soo gaabin karaa kala-go 'waqtiga uu miyir qabo, si ay ugu muuqato in uusan jirin wax nasasho ah.
Kahor jawaabta su'aasha waa la fahmi karaa jiritaanka xaqiiqooyinkan waa in la fahmaa, in kasta oo xaqiiqda lafteeda laga yaabo inaan la xaqiijin. Markii xaqiiqooyinkaas la fahmo, qof raba inuu miyir qabo inta lagu jiro muddada mugdiga ah ee udhaxeysa toosa iyo gobolka riyada wuxuu fahmi doonaa in xaalada miyirku aysan ahayn in lagu noolaado kaliya waqtiga la fiirinayo, haddii aan xaaladaas miyirku ay jirin inta lagu soo jeedo. iyo riyooyinku riyooyinku; Si kale haddii loo dhigo, ninku waa inuu ka weynaadaa nin ka warqaba waxa uu isu yaqaanno, laakiin waa run ahaantii kaliya kaydka wadarta guud ee dareenka taas oo dareenku ka dhigayo iftiinka miyirka ee maskaxda. Waa inuu ogaadaa inuu yahay Iftiinka Maskaxda ee maskaxda, kana duwan yahay aragtida waxyaalaha iftiinka loo rogo.